Fadhiga Baarlamaanka oo mar kale baaqday - BBC News Somali
Fadhiga Baarlamaanka oo mar kale baaqday
Saaka oo la filayay in baarlamaanku fadhi isugu yimaado si loo ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay, ayaa fadhigaasi uu baaqday iyadoo xildhibaanadu aysan soo xaadirin baarlamaanka.
Xoghaynta baarlamaanka, ayaa saxaafadda u sheegay in sababo farsamo uu u baaqday fadhiga baarlamaanka.
Xildhibaanada baarlamaanka, ayaa maalintii arbacada ku murmay habka codbixinta lagu ansixinayo ama lagu diidayo ra'iisul wasaaraha cusub u dhacayso. In ay noqonayso gacan taag iyo in ay noqonayso codka qarsoodiga.
Maalintii Arbacada oo fadhiga baarlamaanka lagu kala dareeray, ayaa guddoomiyaha baarlamaanku go'aamiyay in codka uu qarsoodi noqonayo, balso kooxdii doonaysay in gacanta la taago ayaa buuq dhalisay, iyadoo ka soo horjeestay go'aankaas.
Labada dhinacba waxay ku doodayaan in dastuurku uu qabo habka ay doonayaan in codbixintu u dhacdo.
Sida uu weriyaha BBC, Maxamed Maxamuud Dhoorre u sheegay Ahmed Cabdi Nuur oo waraystay, waxaa hadda ka socda hoteelada xildhibaanadu ka degan yihiin magaalada Muqdisho shirar gaar-gaar ah, oo muuqda in looga gol leeyahay isku soo dhowaynta labada dhinac si fadhiga baarlamaanku u qabsoomo.
Waxaa kaloo magaalada Muqdisho ka dhacay dagaal iyo duqayn qaybo ka mid ah magaalada, ugu yaraan 5 qof, ayaa ku dhintay.
Dhinaca kale, deegaanada Beled-Xaawo iyo Ceel-Gaal, ayaa degan. Goobahaas, waxaa maalmihii la soo dhaacay ku dagaalamayay ciidamada ahlu-sunnah iyo kuwa dowladda oo wada socda iyo xooggaga al-Shabaab oo ka soo horjeeda.